Shakhsiyadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) Iyo Aqoontayda Qaybtii kowaad. By: Faisal Abdi. - www.dhanbaalnews.com
Shakhsiyadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) Iyo Aqoontayda Qaybtii kowaad. By: Faisal Abdi.
Shakhsiyadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) Iyo Aqoontayda Qaybtii kowaad.
Haddii la ogyahay iyo haddii la moogyahayba, waxa jira waajib iyo xil qof kasta ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa. Damiirka nooli waxa uu ina farayaa in aynu ummadda u iftiiminno cidda ku habboon in loo dhiibo ammaanada ummada. Maadaama oo lagu jiro xilli ay doorasho madaxweyne dhawdaayna waxa aan mahuraan u arkaa in il gaar ah lagu eego cidda loo xulanyo hagista qaranka iyo qormada Somaliland. Aniga oo gudanaya waajibaadkaas qof ahaan ila gudboon, waxa aan uumiyaha la wadaagi doonaa maqaallo ku saabsan Shakhsiyadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), sooyaalkiisa iyo sababta uu masuulkani ku kasbaday qalbiyada dad badan oo ku kala nool gobollo iyo geyiyo kala durugsan.
Tan iyo 1978kii ayuu ahaa qof ku lug leh maamulka xafiisyada, markaas oo uu shaqo ka bilaabay Haayad taakulayn jirtay qaxoontigii Soomaaliyeed ee u bara-kacay Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Kurtu-waarray. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waxa tan iyo waagaas lagu xasuustaa hufnaan, shaqo-wanaag, daaddihin iyo dadnimo heer sarreysa.
Dhaqannada lagu majeerto waxa ka mid ah dhegaysiga dadka, si kalsooni leh ayaa uu maqalka ugu raariciyaa dareenka bulshadu u gudbinayso: talo, toosin, dhaliil, aragti iyo arrin kasta oo looga maarmi maayo. Ma aha qof inta uu madaxa ruxo iska illaawa axdiga, waxa uu ku suntan yahay ballan-oofin. Waana nin ka soo baxa qawlka ay ummadda isku ogyihiin, astaantanti waxa ka mid tahay summadaha hoggaamiyaha wanaagsan.
Had iyo jeer waxa uu dareenka la wadaagaa bulshada, isaga oo kaalin laxaad leh ka qaata adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, waddooyinka, ciyaaraha IWM. Waxa xus mudan sida uu ugu dedaalo ama uu dammaanad-qaado waxbarashada boqollaal ama kumannaan arday oo dalka gudihiisaba jaamacado ka dhigtay iyo kuwa hadda ku jira geeddiga aqooneed.
Waa hawl-kar maddaale ah oo si hufan u shaqeeya hiirta waaberi, duhur, galab, fiid iyo caweysba. Xilliyada qaarkood waxa uu shir, abaabul, kulanno iyo olole ku jiraa in ku dhaw 15 saacadood. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waa damal ay ummaddu hadhsato iyo dabar isku haya ummad badan. Waxyaabaha uu sida gaarka ah ugu sheeggan yahay waxa ka mid ah xidhiidhinta dadka, haddii ay yihiin dadkii ay carruurnimada wada koreen, kuwii ay ardayda wada ahaayeen, bahdii ay soo wada-shaqeeyeen iyo guud ahaan ummadda uu ku xidhmay intii uu sida tooska ah ugu jiray siyaasadda Somaliland.
Waayo-aragnimada arrimaha dibadda iyo adduun-weynuhu waxa ay sababtay in uu xidhiidh la yeesho siyaasiyiin badan oo heer caalami ah, kuwaas oo door weyn ka qaadan kara qaddiyadda Somaliland. Waa masuulka ugu dhaw ee rumayn kara himilada qarankeenna iyo in dalku aqoonsi caalami ah helo dawladaha deriska, Afrika iyo qaaraha kale ee dunida.
Guddoomiye Cirro waa qof dhaqan wanaagsan oo ehlu-diin ah, had iyo jeerna waxa lagu arkaa goobaha lagu cibaadaysto ee masaajiddada. Isaga oo aan kala saarin Culimada Somaliland ayaa uu ka qayb-galaa xusaska diiniga ah, kulannada muslimiinta, ciidaha, Jimceyaasha iyo salaadaha waajibka ah. Akhlaaqdiisa togan ee ku qotonta islaamnimada waxa aad ka garan kartaa ereyada aan xajiinta lahayn ee uu dareenkiisa ku cabbiro. Hodannimadiisa qalbigiisa, furfurnaantiisa iyo soo-dhaweyntiisana waxa marag ka ah farxadda wejigiisa laga dheehdo 24/7 (24ka saacadood ee toddobada cisho).
Waxa aan marnaba daah saarnayn in uu yahay qof nabadda jecel, colaadda neceb oo ka shaqeeya walaalaynta shacbiga. Sidoo kale waa siyaasi ka fog dhaqannada aan la jeclaysan ee isku-dirka, balwadda, musuqa, beenta iyo sifooyinka lagu saluugo qaar badan oo ka tirsan madaxda xilka qabata.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waa nin aan u soo shaqo tegin dalka, balse diyaar u ah in ummadda u shaqeeyo, ugana faaiideeyo muruqiisa, maskaxdiisa, wakhtigiisa iyo dedaalkiisa. Waxaanu weysada u biyaystay in uu xaqiijiyo higsiga san ee aynu haabka ku haynno. Waa murashaxa keliya ee illaa hadda diyaarka u ah in la diiwaan-geliyo hantidiisa gaarka ah.
Waxa aan Murashaxa Xisbiga Waddani Md Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ku bogaadinayaa sida uu uga tanaasulay jagadii uu sida hufan u soo hayay laba iyo tobanka sano ee Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, isaga oo muujiyay sida uu diyaarka ugu yahay in uu u tartamo Madaxweynennimo, isaga oo aan olole ahaan u adeegsannin hantida ummadda.